Natiijooyinka Kulamada La Liga: Barcelona Oo Guul Daro Dhabarka Loo Saariyay, Iyo Real Madrid Oo Badisay Athletic Bilbao
HomeWararka CiyaarahaNatiijooyinka Kulamada La Liga: Barcelona oo guul daro dhabarka loo saariyay, iyo Real Madrid oo badisay Athletic Bilbao
May 17, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Kulamo ka tirsan Horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ay guul daro xanuun badan kala kulantay kooxda Celta Vigo.
Barcelona ayaa ku hormartay hogaanka ciyaarta Daqiiqadii 28aad ee ciyaarta xidiga Lionel Mess ayaa hogaanka u dhiibay, Barca ayaana ku waarin goolkaasi markii Santi Mina uu u dhaliyay Celta Vigo goolka bar-baraha daqiiqadii 38aad ee ciyaarta iyadoo qeybta hore lagu kala nastay 1-1.
kooxda Celta Vigo ayaana wiiqday rajadii Barcelona ee Horyaalka Sanadkan isla xidiga Santi Mina ayaa shabaqa kasoo taabtay dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 89aad.
Barcelona ayaa hada leh 76 dhibcood waxayna 7 dhibcood ka danbeysaa kooxda heysa hogaanka horyaalka ee Atletico Madrid.
Dhanka kale kooxda Real Madrid ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Athletic Bilbao guushaasi oo ka dhigeysa in ay baaqi ku ahaadaan kaalinta labaad ee horyaalka.
Real Madrid ayaa ku silicday soo taabashada shaqaba Athletic Bilbao taasi oo keentay in qeybta hore lagu kala nasto 0-0.
Qeybta danbe Real Madrid ayaa sameesay dadaal xoogan waxana u suura gashay in ay hogaanka qabato daqiiqadii 68aad goolkaasi uu ka caawiyay Nacho Fernandez.
ugu dabneyn Kooxda Atletico Madrid ayaa dirtay fariin kale oo ah in ay sanadkan qaadeyso horyaalka kadib guul ay ka gaartay kooxda Osasuna.
Labo gool oo ka yimid xidigaha Renan Lodi iyo Luis Suarez ayaa Atletico madrid ugu filnaan goolashada kulankan.
Atletico madrid ayaa hada leh 83 dhibcood waxaa ku soo xiga Real Madrid oo leh 81 dhibcood halka Barcelona oo ku jirta kaalinta 3aad ay leedahay 76 dhibcood.